Ahlusunada Gobolka Gedo oo guulo ka sheegatay Dagaalo ka dhacay Gobolkaasi – SBC
Ahlusunada Gobolka Gedo oo guulo ka sheegatay Dagaalo ka dhacay Gobolkaasi
Saraakiisha Ahlusuna waljamaaca ee Gobolka Gedo ayaa guulo ka sheegtay dagaalo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaano ku yaala gobolkaasi Gedo .
Afhayeen u hadlay maamulka Ahlusuna ee Gobolka Gedo islamarkaana lagu magacaabo Sh Yuusuf Alqaadi ayaa saxaafada u sheegay in dagaal ka dhacay Deegaan lagu magacaabo Ceel Cade islamarkaana dhexmaray iyaga iyo xoogaga Xarakada Alshabaab almujaahidiin ay guulo ka soo hoyeen islamarkaana ay jab gaarsiiyeen sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa kale oo uu sheegay Sh Alqaadi in Weerarka ay iyagu qadeen islamarkaana ay deegaanka lagu dagaalamay iminka ay gacantooda ku jirto.
Waxa uu tibaaxay Alqaadi in dagaalkan uu yahay mid saf balaaran islamarkaana uu socon doono ayna gobolka gebi ahaantiis ka qabsan doonana xarakada Alshabaab sida uu hadalka u dhigaye, iminkadana ay isla shalay dagaalo dhacay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Kenya ay la wareegeen deegaano sida deegaanka Faxfaxdhuun.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlaay Dhinaca Xarakada Alshabaab ayaa isagana dhankiisa sheegay in dagaalada ka dhacay Gobolka ay uga taagroonaadeen dhinacyadii la dagaalamay islamarkaana ay gaarsiiyeen jab xoogleh.
Sikastaba ha ahaatee Dagaaladan ka dhacaya gobolka Gedo ayaa waxaa ay ka dambeeyeen dhaq dhaqaaqyo iyo isku abaabul dagaal oo mudooyinkii ugu dambeeyay laga soo sheegayay qeybo ka mid ah gobolka islamarkaana ay wadeen dhinacyada goobahaasi isku haya.